रूसी राम्रो विश्वविद्यालय: सूची। शीर्ष व्यवस्था विद्यालय रूस
उच्च शिक्षा - व्यक्तित्व को विकास मा एक महत्वपूर्ण कदम। तर कक्षा 11 स्नातकहरूको अक्सर जहाँ आउन थाहा छैन। कुनै पनि राम्रो रूसी विश्वविद्यालयहरु मा उम्मेदवार कागजात पठाउन गर्नुपर्छ? तिनीहरूलाई केही प्रतिष्ठित डिप्लोमा र जीवनमा सुखी सुरु दिन्छ? कहिलेकाहीं जवानहरूले उमेर 18 वर्ष आफ्नो व्यक्तिको पेशा सजग छैनन् र उनीहरूले एउटा उपयुक्त संस्था लागि टाढा हेर्न छन्। तर, यो रूस मा सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय सूची, समय मा सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा उपयुक्त एक कागजातहरू पेश गर्न जाँच्न expedient छ। त्यहाँ प्रमाणीकरणका लागि यति धेरै विकल्प हो, तर प्रत्येक प्राणको ठाउँ रोज्ने।
रूस मा उच्च शिक्षा को सुविधाहरू
अब देशमा उच्च विद्यालय केही परिमार्जन मार्फत रहेको छ। विद्यार्थीहरूको तयारी युरोपेली स्तर अनुसार ठाउँ लिन्छ। बोलोग्ना प्रक्रिया (शिक्षा को नयाँ प्रणाली को एकीकरण) मानक मोडेल अनुसार आधुनिकीकरण समावेश छ। अब डिप्लोमा संसारभरि धेरै देशहरूमा पहिचान गरिनेछ टी.पी।
उदाहरणका लागि, रचनात्मक सर्तहरू शुरू भइरहेका छन् विधिहरू सिकाउन शिक्षकहरूको तयारीमा, कार्यक्रम व्यक्तिगत त्यसैले चयन गरिएका छन्, र। निकट भविष्यमा, विद्यार्थी कुनै प्रतिबन्ध संग, अर्को एक संस्था बाट सार्न सक्षम हुनेछ।
एक योग्यता दिने चरणमा
वर्तमानमा, सबै विश्वविद्यालयहरु तीन चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयोग गर्नुहोस्। राम्रो रूसी विश्वविद्यालयहरु को पहिलो दुई स्तर लागि केही क्षमता विकास लागि धेरै विकल्प प्रस्ताव। पछिल्लो चरण, अध्ययन को एक किसिम मा।
नयाँ शैक्षिक प्रणाली अनुसार सैद्धान्तिक पक्षमा भन्दा व्यावहारिक ज्ञान र सीप एक ठूलो हदसम्म आवेदन मा केंद्रित। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विशेषज्ञता विशिष्ट निर्देशन को अध्ययन को र गहन व्यापक क्षेत्र समावेश छ। विद्यार्थीलाई पनि योग्यता "स्नातक", "मास्टर" र "विज्ञान डाक्टर" संग प्रशिक्षण तीन स्तर मार्फत जान्छ।
रूस मा शीर्ष 10 विश्वविद्यालयहरु
देश को शैक्षिक संस्थाहरू एक विशाल संख्या प्रशिक्षण, शिक्षकहरूको प्रशिक्षण, को उपाधि को प्रतिष्ठा, र धेरै अन्य मापदण्ड को लागत द्वारा वर्गीकृत छ।
रूस मा सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय दर्जा, सूची धेरै वर्ष को लागि वस्तुतः अपरिवर्तित छ:
Bauman पूर्वोत्तर देश मा सबै भन्दा राम्रो प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दछ।
युमेन मा राज्य तेल र ग्याँस विश्वविद्यालय यस क्षेत्र मा सबै भन्दा योग्य पेशेवरों उत्पादन गर्छ।
Lomonosov मास्को राज्य विश्वविद्यालय एमवी - लामो इतिहास संग विश्वविद्यालय, आधारभूत विज्ञान मा एक राम्रो जग प्रदान गर्दछ।
MGUU - प्रबन्धकहरूले को अत्यधिक कुशल व्यवस्थापकलाई उत्पादन गर्छ।
सेन्ट पीटर्सबर्ग राज्य विश्वविद्यालय - सबै भन्दा राम्रो उच्च विद्यालय को एक, एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय शिक्षा दिने।
रूसी संघ को अध्यक्ष अन्तर्गत RANHiGS कुशल व्यवसायी उत्पादन एक जवान शैक्षिक संस्था हो।
मास्को मा मानिसहरूको मैत्री विश्वविद्यालय 265 गन्तव्यहरू विभिन्न देशका विशेषज्ञहरु तयार छ।
वोल्गा मा KPFU - सबैभन्दा पुरानो शैक्षिक संस्थाहरू मध्ये एक, इंसाफ से रूस मा सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय को शीर्ष समावेश।
MESI सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहकर्मीसँग cooperates र संसारभरि शाखा र प्रतिनिधि कार्यालय को धेरै छ।
SWSU - अर्को शैक्षिक संस्था, रूस मा सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय स्तर मा समावेश गरिएको छ जो।
हाल, प्रौद्योगिकी कलेज लोकप्रिय छन्। सूचना प्रविधि को उमेर मा यो ईन्जिनियरिङ् पेशा बढ्दै माग रमाइलो गर्न थाले भन्ने कुनै आश्चर्य छ। राम्रो धेरै विश्वविद्यालयहरु प्राविधिक रूसी अभिमुखीकरण राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र को स्थिति प्राप्त। यो राज्य समर्थन र सक्रिय यो लाइन विकास पुष्टि गर्छ।
प्रवृत्ति बस गति पाउन थालेका छ, र अर्को दशक भन्दा, यस्तो संस्थाहरू स्नातकहरूलाई अत्यन्तै लोकप्रिय हुनेछ। मात्र देश को सरकार ईन्जिनियरहरु र टेक्नीसियन, तर पनि व्यापार उद्योग को प्रशिक्षण रुचि छ।
विशेषताहरु सैन्य शिक्षा
राम्रो विश्वविद्यालय रूस यो निर्देशन आफ्नो शारीरिक र आध्यात्मिक विकास मा विद्यार्थीहरूको शिक्षामा केन्द्रित छन्। सामान्यतया यस्तो शैक्षिक संस्थाहरू मा बन्द ध्यान ड्रिल भुक्तान छ।
सैन्य कलेज जाने तपाईं र परीक्षा र शारीरिक स्तर पारित गर्न चाहनुहुन्छ बस किनभने प्रबन्धन।
यी संस्थाहरू नागरिक जीवनमा आफ्नो स्थान फेला पार्न नगर्ने विशेषज्ञहरु, तालिम एक misconception छ। वास्तवमा, सैन्य विश्वविद्यालय जो पाउन सकिन्छ मात्र होइन सशस्त्र बलहरु को बाँध्न विश्वव्यापी विशेषज्ञहरु, स्नातक। तिनीहरूमध्ये वकील, खेलाडीहरूलाई, ईन्जिनियर, अर्थशास्त्रियों र अन्य नागरिक विशेषज्ञहरु छन्।
राज्य र विधान प्रक्रियाहरू को विज्ञान धेरै संस्थाहरुमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। तथापि, यो सिर्फ एक व्यवस्था डिग्री र सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्राप्त गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यस मामला मा, त्यहाँ आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम को एक ग्यारेन्टी छ। शीर्ष रूसी व्यवस्था विद्यालय आपराधिक, प्रशासनिक, श्रम र व्यवस्था अन्य क्षेत्रको क्षेत्रमा अत्यधिक योग्य विशेषज्ञहरु उत्पादन।
व्यवस्था - नयाँ दिमाग वर्ष आउँदै जो सबैभन्दा लोकप्रिय उद्योग को एक। एक विविध विशेषता र एक विशाल चयन संग स्नातकहरूको प्रदान गर्दछ किनभने यो, अचम्मको छैन।
यो विज्ञान एउटा विशाल समेट्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, प्रशिक्षण विशिष्ट तरिकामा सञ्चालन गरिएको छ। प्रत्येक पाठ्यक्रम एक निश्चित तरिका मा व्यवसायीक तयार। भर्ना मा आवेदक गर्न विकल्प बनाउँछ:
सबै भन्दा राम्रो रूसी विश्वविद्यालय वकिल, देश योग्य अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरु, आपराधिक प्रशासनिक र संवैधानिक व्यवस्था दिइएको तयार। यो ज्ञान संग, तपाईं सुरक्षा एजेन्सीहरू र विधान शरीर मा, तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय मात्रा को व्यावसायिक कम्पनीहरु मा मात्र होइन, काम पाउन सक्नुहुन्छ।
सर्वश्रेष्ठ कानूनी रूसी विश्वविद्यालयहरु:
मास्को राज्य व्यवस्था एकेडेमी।
खबरोभ्स्क मा अर्थशास्त्र र कानून को राज्य एकेडेमी।
देश sorely शिक्षकहरू र lecturers अभाव, र सरकार यो समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको छ। राम्रो विश्वविद्यालय रूस यो निर्देशन हाल शिक्षकहरूको नयाँ स्तर उत्पादन हुन्छ। यो रूसी शिक्षकहरू हाल सबैभन्दा संसारमा अनुभवी छन् कि टिप्पण लायक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मा सहभागिता, रूस को शैक्षणिक अनुभव यो पुष्टि विदेश।
राज्य संस्थाहरु को सबै भन्दा राम्रो मा शिक्षक शिक्षा प्राप्त स्नातक जीवनमा सुरु दिन्छ। उहाँले रूसी श्रम बजार र विदेश मा मांग हुनेछ। सरकार सक्रिय विदेश बेचिएको र प्रशिक्षण को देश मा पछि मांग तयारी धन छ। तर, हामी शिक्षकहरूले शैक्षिक प्रक्रिया सकारात्मक प्रभाव हुनेछ केवल यो मामला मा व्यक्तिको पेशा द्वारा हुनु आवश्यक छ र यो पेशामा प्रेम, बिर्सनु हुँदैन।
को अर्थशास्त्र पेशा
सायद दशक को एक जोडी पहिले व्यवसाय निर्माण गर्न सकिनँ वित्त को क्षेत्र मा कुनै विशेष ज्ञान। हाल, स्थिति मौलिक परिवर्तन भएको छ। क्षणमा हरेक आत्म-आदर व्यवसायी र अर्थव्यवस्था मा निर्देशित गर्नुपर्छ। प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त गर्न - विश्वविद्यालय यो र पुरानो दिनमा रूपमा छैन कौशल र ज्ञान को लागि प्राप्त गर्दछ।
कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षलाई अध्ययन समावेश, जो को अज्ञानता व्यापार नेभिगेट गर्न संभावना दिनेछु। उच्च आर्थिक शिक्षा संग कुशल व्यक्ति निष्क्रिय रहने छैन। उहाँले सरकार र व्यावसायिक वित्तीय संस्थाहरू, लगानी कम्पनीहरु, विभिन्न निजी कम्पनीहरु र अरूको लागि प्रतीक्षा थियो।
आर्थिक शिक्षा केही रेखाहरू छ:
ऋण र अधिक।
आफ्नो जीवन काम छनौट, आफ्नो मनमा सुन्नुपर्छ। आखिर, पनि सबैभन्दा उच्च भुक्तानी पेशा यदि यो गर्न disposed छैन, एक व्यक्ति आनन्द र एकता ल्याउन छैन। विश्वविद्यालयहरु रूस प्रत्येक गिरावट आफ्ना विद्यार्थी पर्खिरहेका छन् असीम।
एक शब्द कागज वा किताब कसरी लेख्न। सुझाव।
VSU पुस्तकालय - केन्द्रीय काला धरती क्षेत्रको सबै भन्दा ठूलो वैज्ञानिक सूचना केन्द्र
बेलारुसी कृषि एकेडेमी: इतिहास, विभाग र संरक्षित, को पारित स्कोर
नोवोसिबिर्स्क उच्च सैन्य स्कूल: विशेषता
Dmitri Torbinski: ठूलो फुटबल बाटो
को नर्डिक देशहरुमा। सामान्य विशेषताहरु
Belle spiraea: विविधता र हेरविचार
केन्द्रीय दाढी वाला ड्रागन। हेरविचार र मर्मतका
उहाँले पहिलो vinaigrette तयार गर्न थाले। शब्द "vinaigrette" को मूल
Bluefilters - छोडपत्र वा छैन? पानी Bluefilters लागि फिल्टर को समीक्षा
यो Normans - यो ... छ Normans को इतिहास र संस्कृति। राज्य Normans
गुलाब cuttings कसरी उर्तानु गर्न: तैयारी, स्थापना, रोपण
दबाइ "Buscopan।" निर्देशन
अत्यधिक योग्य विशेषज्ञ - को कर्मचारी लागि धन। तिनीहरूले बन्न
आहार "सीढी" - छिटो र सजिलै वजन एक तरिका
पैन मह मा केक: एक फोटो सहितको नुस्खा